Moba Xtreme Racing bụ egwuregwu ọhụrụ sitere na akụkọ ifo Victor Ruiz | Gam akporosis
Victor Ruiz abụwo akụkụ dị mkpa nke mkpụmkpụ akụkọ kpụ ọkụ n'ọnụ nke egwuregwu vidio Spanish (na nke ọ nwere ike inye nku nke ọ na-enyeghị ya ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ dị mkpa ugbu a), ya na egwuregwu dịka PC Futbol ma ọ bụ na Runaway dị ka ihe nkiri eserese nke bụ ire ahịa zuru ụwa ọnụ.
Ugbu a na-eweta anyị Moba Xtreme Racing, egwuregwu ịgba ọsọ nke anyị ga-eji nitros mee ma gbatuo ụgbọ ala anyị ịgba ọsọ dị ka à ga-asị na anyị nọ n'ihu egwuregwu Scalextric. Egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na ntanetị nke anyị nwekwara ike ihu AI mgbe anyị na-eche ka anyị nọrọ na elu nke ndị egwuregwu n'ụbọchị. Gaa maka ya.
1 Ndị Navy Na-akpali oge na ndị ọzọ
2 Onye na-eme egwuregwu na ntanetị maka egwuregwu 1 nkeji
3 Inweta na freemium bandwagon
Ndị Navy Na-akpali oge na ndị ọzọ
Victor Ruiz malitere njem ya na Dynamic Games, ụlọ ọrụ nke ya na ụmụnne ya kere na nke nyere egwuregwu dị egwu nke mere ka anyị rọọ nrọ dị ka ndị Navy Moves, nke ahụ wee kwụsị ịdị mma na ịnụ ọkụ n'obi n'akụkụ niile. Eziokwu ahụ tinye cassette na Amstrad m, nuru ihe ndia mkpọtụ nke si na ya pụta mgbe ọ na-ebu ya, ọ bụụrụ m ezigbo ihe m mechara kwadebe egwuregwu ahụ ị zụtara n'ụlọ ahịa akụkọ ifo nke Madrid n'okporo ámá Santa Engracia (nke m na-eleta ya dị ka na ụlọ ọrụ nrọ).
Dị ka anyị kwuru, Victor so na ụlọ ọrụ ọhụrụ ọhụụ ahụ nke na-agbasa ụwa na na ebe a, dị ka mgbe niile, anyị na-ada. N'agbanyeghị nke ahụ, ugbu a Moba Xtreme Racing na-ewetara anyị, egwuregwu ịgba ọsọ nke anyị na-anya ụgbọ ala anyị na nke ahụ nwere ike bụrụ Camaro maka ọ ourụ anyị niile.
Ya si bido na anyi bidoro isisi isi na amamihe nke otutu afo ịchọta egwuregwu na-akpọ anyị òkù ka anyị pịa bọtịnụ mmalite iji malite egwuregwu ahụ.
Onye na-eme egwuregwu na ntanetị maka egwuregwu 1 nkeji
Ọduọ Moba Xtreme na-akpọrọ anyị gaa egwuregwu ngwa ngwa nke anyị ga-etinye oge dị ukwuu ichere ndị egwuregwu ndị ọzọ karịa ịgba ọsọ ha. Anyị na-ekwu ya n'ihi na site na mgbe agbụrụ ahụ malitere site na egbe egbe, ụgbọ ala anyị ga-amalite ịmalite, nyere aka na onwe anyị na njikwa ahụ gbagoo iji mee ngwa ngwa ma ọ bụ jiri nitros, na gbadata ịgbada.
Ọ bụ eziokwu na n'ime mbụ sekit ekpochi anyị na o siri ike nwere breeki, Ya mere, gaba n'ihu ịchọta na ụgbọ ala gị ga-abanye n'akụkụ ya n'ụzọ nzuzu iji gbalịa imecha.
Ọduọ Moba Xtreme na-enye ọtụtụ sekit na ụgbọ ala unlock kpọghee ekwt n'etiti nke ị nwere ike ịchọta jewels dị ka otu Camaro na anyị nwere site ná mmalite. O nwekwara ihe ahụ freemium iji nweta ike site na ụlọ ahịa ahụ.
Inweta na freemium bandwagon
Ma ọ bụ ezie na enweghị mgbasa ozi, ọ nwere ụlọ ahịa iji nweta ịzụta ụfọdụ uru iji jiri ha mee agbụrụ. Ọ bụ eziokwu na anyị na-atụ uche nkuzi site na windo mbụ nke na-agwa anyị otu esi egwu, ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie na anyị nwere ya n'akụkụ aka nri elu, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke bọtịnụ na nhọrọ dị na ihuenyo mbụ, ọ na-esiri ike na mbụ chọta bọtịnụ enyemaka ahụ; na anyị na-ama mara na na ndị a mobile egwuregwu nkeji mbụ dị oké mkpa iji mee ka ha risịrị.
Maka ihe ọ bụla, ọ bụ egwuregwu a kpara nke ọma, nke enwere ike ịkwalite, ma na na nke mbụ ogbo ọ dị ezigbo mma. Ọ bụrụ n'ịmụta ịchịkwa nitros, ị ga-enwe ọ enjoyụ na ya, ma nwee olile anya na ọtụtụ ndị egwuregwu ga-abanye ka e wee nwee ike igwu ọtụtụ mmadụ. Ihe osise mara mma na nke ahụ n'ọnọdụ anyị na-ahụ na ndị ọzọ, ịgba ọsọ siri ike na ọdịnaya zuru ezu iji kpoo anyị ruo izu.
Victor Ruiz laghachiri ime ihe kacha amasị ya na nke ọtụtụ n'ime anyị gara n'ihu na-egwu kemgbe ọtụtụ iri afọ nke a nke vidio vidio na nyiwe dị iche iche; oké ihere bụ na atụfuru ụgbọ oloko ahụ nke ụlọ ọrụ nke na-akpali ọtụtụ ego ugbu a na mbara ala.
Ihe niile aka Victor Ruiz na-emetụ ga-abụ nke anyị ga-elebara anya. Egwuregwu a gosipụtara nke ọma, yana ụfọdụ ejighị n'aka, mana nke na-emeri ọtụtụ mgbe ịmara etu esi egwu ya.
Egwuregwu ọsọ ọsọ
Katalọgụ nke ezigbo ụgbọ ala dị ka Camaro na akụkọ ndị ọzọ
Ọdịnaya kpọghee dị ka egwu na ụgbọala
Ndịna eserese na-aga aka na usoro izugbe
Lọ ahịa ya na micropayments ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Moba Xtreme Racing bụ nloghachi na egwuregwu vidio nke akụkọ ifo Victor Ruiz nke Dynamic Software
Otu esi zoo notch ihuenyo ma ọ bụ oghere na EMUI